KYAW CHAN NYEIN: Triglyceride levels ဘယ်လို ချမလဲဆိုတာ
Triglyceride levels ဘယ်လို ချမလဲဆိုတာ
ကျန်းမာရေး အသိရှိသူတွေ အဆီများတာ မကာင်းမှန်း သိကြတယ်။ ပိုသိသူတွေက Cholesterol လို့ သိကြမယ်။ (ကိုလက်စထော) များတာ မကောင်းပါ ဆိုပေမဲ့ Low-Density Lipoprotein (LDL) ဆိုတာကမှ မကောင်းတာပါ။ High-Density Lipoprotein (HDL) ကကောင်းတယ်။ Cholesterol ဟာ (ဆဲလ်) နံရံတွေ ဆောက်ဘို့၊ ဟော်မုန်းတွေ လုပ်ဘို့ အသုံးဝင်တယ်။ သိပ်နည်းနေသူဟာ Depression စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒိထက် ပိုသိချင်ရင် Triglycerides (ထရိုင်ဂလစ်စရိုက်) လို့ မှတ်လိုက်ပါ။
Triglycerides (ထရိုင်ဂလစ်စရိုက်) နဲ့ Cholesterol (ကိုလက်စထော)
Cholesterol များနေတာထက် Triglycerides များနေတာက ရောဂါရမှာကို ပိုပြီး တိကျစေတယ်။ Triglycerides နဲ့ HDL အချိုးဟာ နှလုံးကို ထိခိုက်တော့မယ်ဆိုတာ သိဘို့ အရေးကြီးတဲ့ ညွှန်းကိန်း ဖြစ်တယ်။ သွေးထဲမှာ Triglycerides များနေတာနဲ့ Atherosclerosis သွေးလွှတ်ကြော မာတာ-ပိတ်တာ ဆက်စပ်နေတယ်။ ဆက်ပြီးလဲ Heart disease နှလုံး-ရောဂါ နဲ့ Stroke (စထုပ်ခ်) ရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်ရလေ Triglyceride များလာလေ။ မျိုးရိုးလဲ လိုက်နိုင်တယ်။
Triglycerides များ-မများ မစစ်ခင် ၈ နာရီကနေ ၁၂ နာရီ အစာမစားဘဲ နေသင့်တယ်။ 150 mg/dL အောက်သာရှိတာ ကောင်းတယ်။ ၁၅ဝ ကနေ ၁၉၉ ဆိုရင် သတိထားရတော့မယ်။ ၂ဝဝ ကနေ ၄၉၉ အထိ မကောင်းဘူး။ ၅ဝဝ ကျော်ရင် အန္တရာယ် ရှိနေပြီ။
Asparaginase (လူကီးမီးယား) ဆေး၊ Fenofibrate, Gemfibrozil, Clofibrate, Statin (ကိုလက်စထော) ကျဆေး၊ Nicotinic acid ဗီတာမင် ဘီ-၃ နဲ့ ဗီတာမင် စီ တွေ သောက်နေသူတွေ၊ အဆီစားနည်းသူတွေ၊ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း များသူ၊ အာဟာရချို့တဲ့သူ၊ အစာမစုပ်ယူနိုင်တဲ့ ရောဂါ ရှိသူတွေမှာ Triglyceride နည်းနေတာ တွေ့ရမယ်။
Beta blockers, Calcium channel-blocking agents, Clonidine, Reserpine သွေးတိုးကျဆေး၊ Tamoxifen ကလေး မရတာ အတွက်ဆေး၊ Steroids စတီရွိုက်ဆေး၊ Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး၊ Class I Antiarrhythmic agents, Amiodarone, Acetylcholine, Digitalis glycosides နှလုံးရောဂါဆေး၊ Estrogen မ-ဟော်မုန်းဆေး၊ ကိုယ်ဝန်-တားဆေး၊ Colestipol, Cholestyramine (ကိုလက်စထော) ကျဆေး၊ Protease inhibitors (ဗိုင်းရပ်စ်) ဆေး၊ Retinoids ဗီတာမင် အေ၊ Lithium, Antipsychotics စိတ်ရောဂါဆေး၊ Paclitaxel, Toluene ဓါတုဆေး၊ Dimethyl sulfoxide ဆီးအိမ်ရောဂါ ဆေး နဲ့ Alfentanil, Fentanyl, Sufentanil ဘိန်းပါတဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေကနေလဲ Triglycerides များနေနိုင်တယ်။
အပူချိန်-နည်းတာ၊ သကြားဓါတ်-နည်းနေတာ၊ အအိပ်ပျက်-ရောဂါ၊ ဆုံဆို့နာ၊ လေးဘက်နာ၊ နှလုံးကြွက်သားရောင်ရောဂါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်-အဆိပ်သင့်တာ၊ ဓါတ်ဆား-မညီမျှတာ၊ ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ သကြားဓါတ်-နည်းတာ၊ လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း-နည်းတာ၊ ဦးနှောက်-ဖိအားများတာတွေကြောင့်လဲ ဒီရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Triglyceride levels ဘယ်လို ချမလဲဆိုတာ စိန်ခေါ်မှု (ချဲလင့်ခ်ျ) ဘဲ။
1. Healthy lifestyle ကျန်းမာရေး လိုက်စားသူဆိုတဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံ တခုလုံး ပြောင်းရပါမယ်။
2. ဆန်လုံးညို စားပါ။
3. Saturated and trans fats အဆီအမျိုးတွေ ရှောင်ပြီး၊ Monounsaturated and Polyunsaturated fats တွေကို စားသုံးပါ။ Olive oil, Canola oil, Nuts, Peanut oils စားသုံးဆီတွေ ကောင်းတယ်၊ နို့နဲ့ နို့ထွက် အစာတွေမှာ အဆီနည်းတာ ရွေးစားပါ။
4. Omega3များတဲ့ Salmon, Mackerel, Lake trout, Sardines, Herring, Albacore tuna ငါးတွေက ကောင်းတယ်။
5. ကိုယ်လက်-လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ၊
6. အသားထဲက အဆီ ရွေး-ချန် စားပါ၊
7. (ဖိုင်ဗာ) များအစာ၊ ဖွေးဖြူသွားအောင် ချွတ်မထားတဲ့ အစေ့အဆံ စားပါ၊ အသီးအနှံ စားပါ၊
8. အချိုဓါတ်၊ သကြားဓါတ် နည်းတဲ့ အရည်ကိုသာ သောက်ပါ၊
9. အရက် လျှော့ပါ၊ ရှောင်ပါ၊ ဆေးလိပ် ဖြတ်ပါ၊
10. ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ပါ။
လိုသေးရင် ဆေးကူရမယ်။ Cholesterol နဲ့ Triglycerides တွေချဘို့ ဆေးတွေကတော့ Fibrates တွေ ဖြစ်တယ်။ Gemfibrozil (Lopid), Fenofibrate (Tricor) နဲ့ Niacin တွေပါတယ်။ အစာ-မရှောင်ဘဲ၊ ဆေးတခုထဲနဲ့ မရတာ သတိထားရမယ်။
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 10:47 PM